पक्राउलगत्तै दर्जनलाई मुद्दा चलाइने, सुनकाण्डमा मुछिने सबैको जागिर चट्
काठमाडौं, २५ पुस । नक्कली डाक्टर, नक्कली पाइलट र एटीएम कार्डको पिन नम्बर चोरी पक्राउ काण्डमा सफलता पाएको नेपाल प्रहरीको सीआईबीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको सुन तस्करीको जालो तोड्न सफलता पाएको छ ।
विगतमा आफूले प्रहरीको सेटिङमा एक सयपटक सुन ल्याइसकेको बाँकेका गोपालबहादुर शाहीको बयानपछि डीआईजी गोविन्द निरौलालगायत केही प्रहरी अधिकृत निलम्बनमा पर्ने भएका छन् भने केहीले जागिरबाटै हात धुनुपर्ने बुझिएको छ ।
गत बिहीबारै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तस्करीमा संलग्न जतिसुकै माथिल्लो कर्मचारी वा व्यक्ति भए पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार डीआईजी निरौलाले विमानस्थलबाट सुन तस्करीको धन्दा चलाएको ६ महिना बितिसकेको रहेछ ।
गत बिहीबार पक्राउमा परेको गिरोहले महिनामा तीनपटक गरी एक सय किलोसम्म सुन तस्करी गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले एक तह बढुवा गरी उनलाई एयरपोर्ट सुरक्षाको जिम्मा दिएका थिए ।
सामान्यतः बढुवालगत्तै मालदार ठाउँमा पठाइँदैन, तर ओलीसँग ज्यादै घनिष्ट सम्बन्ध भएका कारण आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको सिफारिसमा निरौलाले यो अवसर पाएका हुन् । बिहीबार बरामद गरिएको ३३ किलो सुन तेह्रथुम घर भएका सुन व्यापारी प्रमोद श्रेष्ठ, मारवाडीहरू पवन अग्रवाल, गोविन्द अग्रवाल, गोविन्द सरियालगायतको भएको खुलेको छ ।
सुन तस्करी गर्ने यस्ता ग्याङ पाँचवटा भएको सूचना नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले तीन महिनाअघि थाहा पाएको थियो । तर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुरक्षा टोली र भन्सारका कर्मचारीहरूको गतिलो सेटिङ भएका कारण सीआईबीलाई निकै ठूलो मिहेनत गर्नुपरेको थियो । सीआईबीले उनीहरूको सेटिङ घेरा बाहिर सुन समात्न गरेको तेस्रो पटकमा गत बुधबार गोल्डेनगेटमै सुन समातेको थियो ।
सुन तस्करका नाइकेहरू कुन कुन देशमा बस्छन् ? को कोसँग कुराकानी गर्छन् ? भन्ने निगरानी गर्दै आएको सीआईबीलाई बुधबार दिउँसो दुबईमा रहेको आफ्नो सुराकीले टेलिफोन गरी ठूलो परिमाणमा सुन आउँदै गरेको सूचना दिएको बताइन्छ ।
यही सूचनाका आधारमा कस्ता कस्ता मान्छेले के कसरी सुन ल्याउँछन् र भन्सारबाट कसरी छोडिन्छ भन्ने सूचना सीआईबीले संकलन गर्दै गयो । विमानस्थलमा उत्रनेवित्तिकै हुलया मिलेको भरियालाई सीआईबीको टोलीले पिछा गर्न थाल्यो ।
भरियाहरूले रिङरोड नजिकैको गोल्डेन गेटमा आएपछि फोन गरेर सुन लिन मान्छे बोलाएका थिए । सुन तस्करलाई मात्रै नभएर सुन तस्करीमा सहयोग गर्नेहरूलाई पनि उजागर गर्ने अभियानअन्तर्गत गोल्डेन गेटमा आइपुगेपछि मात्रै सीआईबीले भरिया पक्रेको थियो ।
तस्करीमा सहयोग गर्नेमध्ये भन्सारका २९ जना कर्मचारी निलम्बनमा परिसकेका छन् भने को को प्रहरीमाथि कारबाही अघि बढाइएको छ ? छिट्टै रहस्य खुल्ने बुझिएको छ । एक दर्जन प्रहरी तथा ठूलो संख्यामा भन्सारका कर्मचारीमाथि मुद्दा चल्ने भएको छ । सम्भवतः सीआईबीले यसै साता केहीलाई गिरफ्तार गर्नेछ ।
डिबी लामादेखि यताका प्रायः सबै आईजीपी जसरी भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् । त्यसरी नै २०५४ सालयता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका प्राय प्रहरी प्रमुखहरू सुन तस्करीमा डामिने गरेका छन् । २०५४ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरीकै संरक्षणमा सुन तस्करी गराएको घटना अहिलेसम्म पनि अत्यधिक चर्चामा छ ।
तेस्रो मुलुकबाट सुन तस्करी गराएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र्याउने र त्यसपछि प्रहरीको स्कर्टिङमा भैरहवा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज पु¥याउने गरेका थिए । यसका लागि निश्चित तस्करहरूले गृहमन्त्री गौतमलाई हातमा लिएका थिए, खबर तरुणमा छ ।
पञ्चायतकालमा दरबारले यसरी नै निश्चित प्रहरीलाई सुन तस्करलाई सहयोग गर्न खटाउँथ्यो । तर यतिबेला भने तस्करहरूले सिधै प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीको सेटिङ मिलाउने गरेको रहस्य खुलेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय मिानस्थलको सुरक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर तस्करहरूसँग साँठगाँठ गर्ने प्रहरी अधिकृतहरू प्रायःले उन्मुक्ति पाएका छैनन् ।
डीआईजी गोपाल भण्डारी सुन काण्डको मुद्दा चल्दा चल्दै रिटायर्ड भएका थिए । विजयलाल कायस्थलाई हेडक्वार्टर तानिएको थियो । एसएसपी रविराज श्रेष्ठ बर्खास्तीमा परेका थिए । हाल उनी यति एयरलाइन्समा काम गर्छन् । कल्याण तिमिल्सेनाले पनि एसपी हुँदा नसिहत पाएका थिए ।
केही महिनाअघि तनहुँ घर भएका एसपी विकासराज खनाल पनि तस्करी काण्डमा परेका थिए, तर एमालेको कार्यकर्तासमेत भएका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग चुनाव हारेका किसान श्रेष्ठको भनसुनमा बचाइदिएका थिए ।
बिजुलीको लाइन काट्न उत्रिएका मन्त्रीलाई अहिले निल्नु न ओकेल्नु !
एसईईको नतिजा प्रकाशनमा सरकारले लापरबाही गर्यो : पूर्व शिक्षा सचिव नेपाल
सांसद धारणा : ऊर्जा, परराष्ट्र र गृहको बजेटमाथि छलफल
भाँडिएको राप्रपा भित्र अर्कै रडाको , सुनिल थापाको गतिविधि छताछुल्ल